Madaxweyne Farmaajo oo Shir caalami ah ka furmay Muqdisho
MUQDISHO Soomaaliya - Madaxweyne Farmaajo ayaa saaka oo Isniin ah ka daah-furay Muqdisho Shir heer caalami ah, oo looga hadlayo amniga dalka iyo bixitaanka ciidamada Midowga Africa ee AMISOM.
Hogaamiyaasha dowlad goboleedyada, Wakiilada beesha caalamka, gaar ahaan Midowga Africa, Midowga Yurub, QM iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka qeybglaya Shirka oo ka furmay Xarunta Xalane.
Kulankan waxa uu daba socdaa Shirkii arrimaha Soomaaliya ee London ka dhacay bishii May ee sanadkan, waxaana dib u eegis lagu sameynayaa waxyaabihii ka hergelay qodobadii shirkaasi iyo caqabadaha taagan.
Wakiilka Midowga Africa ee Soomaaliya, ahna Madaxa AMISOM Francisco Madeira ayaa la shir-gudoominaya Madaxweyne Farmaajo kulankan diirada lagu saarayo hergelinta qorshaha amniga qaran iyo sidii ciidamada dowladda Federaalka ugala wareegi lahaayeen mas'uuliyadda amniga AMISOM, oo billaabanaya sanadka soo socda.
Madeira ayaa sheegay in laga hadlayo arrimaha ku aadan xuquuqda dhaqaale ee ciidamada qaranka Soomaaliya, maadaama ay la wareegayaan mas'uuliyadda amniga guud ahaan dalka.
Amaanka magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadooyinka ku dhaw goobta Shirka ee Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ayaa aad loo adkeeyay, iyadoo la hakiyay dhaq-dhaqaaqa gaadiidka dadweynaha.
Shirka amniga Soomaaliya oo ka furmay Brussels [Daawo]
Soomaliya 02.05.2018. 13:41
Wafuudka Beesha Caalamka ayaa la filayaa inay khudbado ka jeediyaan Shirkan oo yimid xilli...
Farmaajo oo ka hadlay qorsheyaashii u hirgalay dowladdiisa
War Saxaafaded 05.12.2017. 23:51